कसरी गर्ने कौसी खेती ? फाइदा जानिराखौ - कृषि सूचना
कसरी गर्ने कौसी खेती ? फाइदा जानिराखौ
२०७८ बैशाख १५ गते कृषि सूचना
हिजोआज सहर बजारमा खेतीयोग्य जमिनको कमी हुँदै गएपछि धेरै मानिसले विकल्पमा कौसी खेतीलाई अगाडि सारेका छन् । खेती गर्ने जग्गा पर्याप्त नहुने सहरी क्षेत्रमा परिवारको दैनिक तरकारीको आवश्यकता पूर्ति गर्न कौसी खेती गरिन्छ। आजभोलि यसको प्रचलन काठमाडौं लगायतका सहरमा बढ्दै गएको छ। यसबारेमा सरकारी कृषि अनुसन्धान निकायदेखि निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाले नयाँ प्रविधि र सैलीको विकास गर्दै आएका छन्।
के लगाउने ?
जरा सकभर कम फैलने तथा गहिराईमा सीमित हुने बाली कौसी खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ। लामो समयसम्म छिटो छिटो उत्पादन दिने र बोट धेरै नझाङ्गिने बाली कौसीमा लगाउनु पर्छ।
कौसी खेती गर्दा देखा पर्ने एउटा समस्या हो लाही किरा । तरकारी बालीहरुमा प्रायः लाही किरा बढी लाग्दछ । यो किराको व्यवस्थापनको लागि निमको तेल ५ एमएल प्रति लिटर पानीमा मिसाएर हरेक हप्ता छर्नुपर्छ । यस्तै पुतलीको लार्भाले काउली जातका तरकारीहरुमा निकै हानी पु¥याउँछ । यो किरा व्यवस्थापनको लागि१ सय ग्राम चिउरीको पिनालाई कपडामा पोको पारी प्रति लिटर पानीमा एक रात डुबाउने र त्यो झोललाई ४ भाग पानीमा मिसाएर बोट भिज्ने गरी छर्नुपर्छ । यस्तै औंसा÷ फ्रुट फलाई किराले फलभित्र फुल पारी फल कुहाउने भएकाले यो किराको व्यवस्थापनको लागि फेरोमेन ट्रयाप प्रयोग गर्नुपर्छ भने डढुवा रोगले पातलाई डढाउने भएकाले यसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि ट्राइकोडर्मा पाउडर दुई ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर पुरै भिज्ने गरी हप्तै पिच्छे छर्नु पर्दछ । माटोमा रोग किरा नलागोस् भनेर गाइबस्तुको पिसाब प्रयोग गर्नुपर्छ।
सारिएको बोटको छेउमा साना साना लठ्ठी गाढेर साहार दिनुपर्छ। साथै बेलाबेलामा गोडमेल पनि गर्न आवश्यक छ। लहरे बाली हो भने डोरी टाँगी दिन पर्छ। जसले बोट मौलाउन पाउँछ र राम्रो उत्पादन दिन्छ। कौसीमा खेती गरिएका फलफुल र तरकारीलाई एकनासको चिस्यानको आवश्यकता पर्दछ। बिरूवामा बढी सुख्खा र बढी पानी हाल्नु हुँदैन। कहिले काहीँ चर्को घाम लाग्दा भाँडा तातेर बिरूवा ओइलाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा छहारी तिर सार्नु पर्छ।
कौसी खेतीका फाइदा
कौसी तरकारी खेती निकै फाइदाजनक मानिन्छ । आफ्नो इच्छाअनुसार उत्पादन हुने तरकारी ताजा, स्वच्छ, सफा र विकाररहित हुनुको साथै तरकारी किन्नका लागि हुने दैनिक खर्च तथा समय बचत हुने भएकाले यो निकै नै फाइदाजनक छ ।
कौसी खेतीले अक्सिजनको मात्रा बढाउन र कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा घटाउन पनि यसले सहयोग पुग्छ ।
हरियालीको कारण घर पनि सुन्दर देखिन्छ । बिहान र बेलुकाको फुर्सदमा घरका सदस्यहरुबाट रेखदेख तथा स्याहार–सम्भार हुने हुँदा शारीरिक अभ्यासका साथै रमाइलो अनुभव हुन्छ ।
केही किसानहरुले विषादीको प्रयोग गरी समय नपुग्दै बजारमा तरकारी लैजाने गर्छन् । कौसीमा तरकारी उत्पादन गर्नेहरु यस प्रकारको विष सेवनबाट बच्न सकिन्छ।
Tags: kausikheti, कौसी खेती, व्यावसायिक खेति
पछि अङ्गुर खेती प्रबिधी र यसको उपयोगिता
अघी कागती खेती गर्ने सरल तरीका : अनेकौ फाइदा जानिराखौ
4 thoughts on “कसरी गर्ने कौसी खेती ? फाइदा जानिराखौ”
Pingback: कौशीमा तरकारी लगाउनेलाई निः शुल्क बीउ र मल – krishisuchana
राजु तामांग says:
नमस्कार बिरुवा सार्द मल मिसाएको माटोमा सार्द राम्रो हुन्छ कि नमिसाएको ?
अनि माटोमा रोग नलाग्न मानिसको मुत्र संकलन गरेर हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ भने कसरी प्रयोग गर्द राम्रो हुन्छ ?
Pingback: कौसी खेतीमा रमाउँदै गृहिणीहरु - krishisuchana